March 14, 2012 na 4:20 obi
ogologo ndụ na-Transposh, ọbụna ma ọ bụrụ na m na-eme mkpesa, M ka na-eji ya 🙂
M na-emeghị melite ma ndị ọhụrụ version otú ahụ ka m ga-elele
March 27, 2012 na 2:27 na
Adịghị m imelite ya ugbu a n'ihi na m na-amaghị ihe ọ bụla ọhụrụ ọrụ tụnyere na ndị agadi na version. Ma i nwere ike tinye a ọrụ nke nwere ike ime ka ọ bụla na peeji nke ezigbo .html page, nke a nwere ike ime ka wordpress ngwa ngwa..
Daalụ nke ukwuu..
March 27, 2012 na 10:53 na
Emelite bụ n'ozuzu a ezi ihe, banyere-eme ya ngwa ngwa, i nwere ike tụlee iji a cache plugin (dị ka wpsupercache) na ga-eleghị anya nweta ihe mma ị na-achọ.
March 30, 2012 na 4:31 obi
M na-eji nke a plugin for ogologo oge. Ma anyị mba gwara m anyị na saịtị bufee CPU, otú nke a nwere ike ime ka a plugin nsogbu?
March 31, 2012 na 2:28 obi
Nke a na-eme na-aṅụ plugin CPU oge, nke nwere ike ịbụ ukwu ebelata mgbe eji a na-akwado na ebe nchekwa caching ngwọta, dị ka memcached ma ọ bụ APC
i nwere ike ịjụ gị Bochum na-eweta ihe ndị
April 7, 2012 na 5:26 na
Nnọọ, chọpụtara, na mgbe na-agbanwe agbanwe asụsụ na-agbanwe ọnọdụ nke a edebanyere ọrụ na ndị ọbịa.
Olee otú m pụrụ dozie nsogbu a?
April 28, 2012 na 11:42 obi
Agaghị m n'aka na m ịghọta ihe iseokwu ị na-akuko, na-agbalị inye nkọwa ndị ọzọ otú ahụ ka m ga-enwe ike inyere.
June 17, 2012 na 8:02 na
Na WP 3.4 + Site Transposh 0.8.2 nke a abụghị nsogbu, ekwe omume ihe kpatara ya bụ WP.
April 9, 2012 na 7:07 obi
Akwa ngwa mgbakwunye, ọ dị jụụ.
Ma syntax nke translation bụ nnọọ ihe ọhụrụ, bụ ụzọ ọ bụla na-etinye ikpe akụkụ ebe ọzọ mgbe edezi?
April 28, 2012 na 11:39 obi
N'agbanyeghị na-arụ ọrụ na, Otú ọ dị, e nwere ndị a ole na ole constants nwere ike na-agbanwe na n'elu parser.php faịlụ, ọ bụ ezie na a ga-eleghị anya ga-akwado n'ọdịnihu, na ga-eleghị anya ghara ịdị ire gị ugbu a nsụgharị.
Ike 2, 2012 na 3:43 obi
Ndewo e ! Dị nnọọ gbazie na French version gị post 😉 Ime gị website participative bụ oké echiche, dị ka gị plugin bụ!
Ọtụtụ ndị na ekele gị na oké ọrụ na-enyere anyị mmeghe anyị asụsụ ala, Obi Ụtọ na Birthday ka Transposh!
Ike 2, 2012 na 3:48 obi
Oh n'agbanyeghị, n'etiti English na French ọnọdụ nke nouns vs. adjectives na-Switched, na trasposh ụzọ nke ịcha ahịrịokwu nnọọ enweghị usoro, ọ na-eme ụfọdụ ahịrịokwu ada ajị ajị na-enweghị ụzọ reordering okwu n'ụzọ kwesịrị ekwesị… Dị ụzọ ọ bụla na-eji ponctuation bee ahịrịokwu n'ime iberibe kama ize ha nnọọ enweghị usoro?
Ọtụtụ ekele ọzọ 🙂
Ike 3, 2012 na 9:58 na
Daalụ maka ịrụzi na French version, ukwuu ekele. Eche ime otu ihe ahụ maka plugin onwe ya?
Banyere random ọnwụ, ọ bụghị na random, ọ ga-ebipụ na HTML entities, nọmba, punctuations na HTML. Ndị na-iwu na ga-agbanwe na Parser faịlụ, na anyị na-arụ ọrụ na mma n'ozuzu usoro. E wezụga nsogbu ndị ị kwuru na e nwere nsogbu metụtara gburugburu dị ka okwu na sọrọ pụtara na okike mbipụta n'asụsụ ụfọdụ. Ya mere, azịza bụ “ka na-arụ ọrụ na”.
Daalụ maka ihe na ndenye
Ike 3, 2012 na 11:16 na
Nye m, ya na faịlụ na “esi” na m ga-eme ihe kasị mma m ịsụgharị plugin.
Nsogbu ọzọ: ihe oyiyi na-adịghị egosi na English version / French otu. Nwere ike ịlele on http://www.sahal.fr: Eng “Banyere Alexandre Sahal” / Fr “Banyere Alexandre Sahal”
Ike 3, 2012 na 11:44 na
Akpa, banyere efu image. Gị isiokwu na-eji ihe a na-akpọ timthumb (nke m na-echeta bụ a nche nke ụfọdụ ebe) na-erepịakwa unneeded ego, M atụ aro ka ị na-eji a nkịtị image na mkpado ma ihe ga-eleghị anya dị nnọọ na-arụ ọrụ.
Banyere translation nke plugin, faịlụ na-ama nyere na ihe i nwere, kacha ụzọ maka ịsụgharị .po / .mo faịlụ dị ka m na-ahụ na ọ bụ iji a plugin akpọ “codestyling orunótu” nke bụ nnọọ ogologo atụ.
Anyị na-enwe obere faịlụ ịsụgharị maka edit interface na js / lang ndekọ.
Kwesịrị ịdị – kaadị e nyere nsụgharị 😉
Ike 16, 2012 na 10:46 na
Hi m iyi na-enwe a kama na-akpali nsogbu, ya anya dị ka ọtụtụ asụsụ (Afrikaans, Íslenska na ndị ọzọ) enye nsogbu na anaghị ịsụgharị menu ihe, na-aga mgbe niile, na-eji dochie ederede na ihe ọ bụla.. ya mere e nwere nnọọ blocks na ihe ọ bụla na ha.
Mbụ m chere na nke a mere site cufon, Ma, ozugbo m ahaziri ya wepụ cufon maka asụsụ nile ma e wezụga m ndabere. ma ya ka na-eme.
Gịnị mere a ga-eme?
Ga-eji google API isi fix a nke?
Ike 20, 2012 na 10:33 na
Mgbe ị na-ewepụ cufon nke na-abụghị ndabere asụsụ, ị kwadebere akpaka translation nchekwa data na caches maka 3rd otu wordpress utils?
Amir Colnect na-ekwu,
June 29, 2012 na 2:43 obi
Na-atụ anya ga-eme n'ọdịnihu na nmepe na mmelite si Transposh. N'ezie, ọ na-aga na-abụ a egwuregwu na-agbanwe agbanwe ngwaahịa ozugbo zuru 🙂
July 24, 2012 na 12:45 obi
Nke a bụ ihe ndị magburu onwe ngwa mgbakwunye…M m ekele..
M ga-achọ ịjụ Olee otú m pụrụ ikekwe ịgbanwe font ndị sụgharịrị ederede egosi…
Dị ka ihe atụ…ọ bụrụ na m nwere Bekee ma na Grik…Olee otú m pụrụ ịgbanwe Grik font ezinụlọ (ka Arial ahapụ ekwu – na-akpata ndabara ọ na-abịa na a serif ezinụlọ).
Daalụ…n'ihi na ihe nile…
November 21, 2012 na 10:13 na
Gị ngwa mgbakwunye dị ukwuu.
December 5, 2012 na 1:45 na